स्पर्सको लगातार दोस्रो हार !! नफापेको वेब्म्लीमा क्लोपलाई बिजयी सुरुवात !! - Experience Best News from Nepal
स्पर्सको लगातार दोस्रो हार !! नफापेको वेब्म्लीमा क्लोपलाई बिजयी सुरुवात !!
इंग्लिश प्रिमिएर लिग प्रिमिएर लिग खेलको पाचौ म्याच डे अन्तर्गत पहिलो खेल स्पर्स (टोटेन्ह्यम) विरुद्ध लिभरपूलको खेलमा लिभरपूल २-1 ले बिजयी भएको छ। खेलमा रेड्सका निम्ति पहिलो गोल जर्जिनो विजनाल्डम गरेका थिए। खेलको सुरुमै सासियो मानेले गरेको गोल अफसाइड मानियो। जर्जिनोले गरेको पहिलो गोल हेडर मार्फत भएको थियो।
खेलमा लिभरपूलका निम्ति दोस्रो गोल फिर्मिनोले गरेका थिए। स्पर्सका निम्ति एक मात्रै गोल भने अतिरिक्त खेलाडी एरिक लमेला ९०+3 मिनेटमा गरेका थिए। यस संगै स्पर्सले ९० मिनेटको खेलमा कुनै गोल गर्न सकेन र अन्तत ३ अंकबाट चुक्यो।
लिभरपूलका म्यानेजर जर्जेन क्लोपलाइ सबै भन्दा अनुकुल मानिएको वेम्ली रंगशालामा लिभरपूल बिजयी हुदा क्लोप निकै खुसि देखिएका छन्। यो हप्ताको सबै भन्दा ठुलो मानिएको स्पर्स विरुद्धको खेलामा क्लोपको टोलीलाइ ३ अंक मिलेको छ। स्पर्स भने वार्टफर्ड र लिभरपूल गरि लगातार दुइ हार ब्येहोरेको छ।
स्पर्स ५ खेल खेल्दै सिर्फ ९ अंक बटुलेको छ भने लिभरपूल ५ खेलमा कुनै पनि खेल न हारी १५ अंक बटुलेको छ। हाल सम्म लिभरपूलले ३ खेलमा क्लिनशीट प्राप्त गरेको छ ।
सलाह भन्दा उत्कृस्ट बन्दै ह्यारी केन ! को बन्दै छ यो सिजनको बादशाह ? हेर्नुहोस यस्तो छ भविष्यवाणी
हाजार्डको ह्याट्रिकमा चेल्सी बिजयी ! अंक तालिकामा अग्र !
क्रिस्टियानो रोनाल्डो माथि लिभरपूल स्टार भ्यान डाइकले गरे यस्तो आलोचना
लिभरपूल र स्पर्सलाई सबै भन्दा ठुलो झड्का !! पी.एस.जि र बार्सिलोनाको विजय यात्रा !
फुल्हामका मित्रोभिच उच्च गोल कर्ताको अग्रज बन्दै !! पछि परे सलाह र केन !!